Caalamka, 26 December 2018
Arbaco 26 December 2018
Diyaaradaha Israel oo duqeeyey Suuriya
Wakaaladda wararka Suuriya ee SANA, ayaa sheegtay in habka difaaca gantaallada dalkaas uu iska caabiyey gantaal lagu soo weeraray meel ku dhow magaalada caasimadda ah ee Dimishiq.
Daacish oo sheegatatay qarax ka dhacay Libya
Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas’uuliyadda qarax ismiidaamin ahaa oo Talaadadi shalay lala beegsaday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Libyan.
Turkey: Cagta ayaan marin doonnaa Kurdish-ka Syria
Turkey ayaa manata sheegtay inay ka go’an tahay in ay cagta mariso ciidamada Kurdish-ka dalka Suuriya.
Turkey oo sheegtay in Trump uu aqbalay casuumadda Erdogan
Sarkaal Turkish ah ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump uu aqbalay casuumadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ee ah inuu dalkaas booqdo.
Turkiga oo Hakiyay Howlgalkiisii Miletari ee Syria
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Jimcihii sheegay in waddankiisu uu si ku meel gaar ah u hakin doono howlaha militari ee ka dhanka ah xoogagga Kurdishka ee uu Maraykanku taageero ee jooga woqooyiga bari ee dalka Syria.
Ciidamada Mareykanka ee Afghanistan oo la sheegay in la dhimayo
Dowladda Afghanistan ayaa hoos u dhigtay muhiimadda qorshe la sheegay in lagu dhimayo ciidamada Mareykanka ee dalkaas, ayada oo sheegtay in ciidamada ammaanka Afghanistan ay awoodaan inay dalkooda ilaaliyaan oo ay difaacaan.
Howlihii garoonka Gatwick ee London oo hakad galay
Shiinaha oo xiray haweeney Canadian ah
Dowladda Shiinaha ayaa ku tilmaamay xarig haweeneey u dhalatay dalka Canada oo lagu xiray Shiinaha mid ku yimid sababo la xiriira haweeneydan oo si sharci darro ah uga shaqeyneysay Shiinaha.
Kanada oo Wax ka Badashey Habka Warbixinada Amniga
Taliban oo ka hadashay wada-hadallada Mareykanka
Taliban ayaa sheegtay in wada-hadallo socda oo ay la leedahay Mareykanka diiradda lagu saarayo oo kaliya sidii ciidamada ajnabiga looga saari lahaa dalka Afghanistan, islamarkaana wararka arrintaas ku duwan ay yihiin dacaayad.
Haweeneey Yemeniyad ah oo lasiiyay fiisaha Mareykanka
Waaxda Arrimaha dibadda Mareykanka ayaa u ogolaatay dal-ku-galka wadankaan Mareykanka hooyo u dhalatay dalka Yemen oo dooneysa in ay soo booqato wiilkeeda oo labo sano jir ah oo ay dhaqaatiirtu sheegeen inuu qarka u saaranyahay inuu u dhinto xanuunka kansarka maskaxda ku dhaca.
Sacuudiga oo cambaareeyey qaraarkii Mareykanka